OPTISMILE INC. MAZWI NEZVINOGONESESWA NENZIRA DZOKUDZIDZA
Tsananguro yakadzama yezvinhu uye / kana masevhisi
OptiSmile Inc.i bhizinesi muindastiri yemazino inopa hutano hwemazino uye nhumbi.
Iyo webhusaiti inoitwa neOptiSmile Inc. Kushandisa kwako webhusaiti kunoenderana nekutambira kwako uye kutevedzera zvirevo, zvirevo, zviziviso uye zvinorema zvakatarwa pazasi ("Mitemo neMamiriro"). Iwe unofanirwa kuaverenga izvozvi. Iko kushandisa kwako webhusaiti kunoreva chibvumirano chako kune iyo Mitemo uye Mamiriro.
OptiSmile Inc. inochengetera kodzero yekugadzirisa iyo Mitemo nemamiriro chero nguva uye pasina ziviso kwauri. Kuenderera kwako kwekushandisa kwewebhu webhusaiti mushure mechero shanduko yatanga kushanda inoita chibvumirano newe chekugara uye kusungwa neMitemo neMamiriro, sezvakachinjwa
OptiSmile Inc. haivimbise kuwanikwa kwemasevhisi anopiwa pawebhusaiti ino ("maSevhisi") kana kurongeka kweruzivo uye / kana mifananidzo pane ino webhusaiti. Isu hatiite mamiririri kana warandi, ingave inoratidzira kana inorehwa, uye hatitore chikwereti kana mutoro wekuita kwakakodzera kwewebhusaiti uye / kana maSevhisi uye / kana ruzivo uye / kana mifananidzo iri mune ino webhusaiti, uye maSevhisi anoshandiswa saizvozvo panjodzi yako wega. Kunyanya, isu hatipe garandi yekuti maSevhisi achasangana nezvido zvako, kusavhiringidzika, nenguva, uye kuchengeteka kana kukanganisa.
Nzira dzekubhadhara dzakagamuchirwa
Kubhadhara kunogona kuitwa kuburikidza neVisa uye MasterCard uye Mobicred
Kadhi kuwana uye chengetedzo
Kadhi kutengeserana kuchawanikwa kweOptiSmile kuburikidza nePayGate (Pty) Ltd vanove vanobvumidzwa nzira yekubhadhara kune ese maSouth Africa Kuwana Mabhangi. PayGate inoshandisa yakanyanya kuomarara nzira yekunyorera, inonzi Secure Socket Layer 3 (SSL3) uye hapana Kadhi ruzivo rwakachengetwa pawebhusaiti. Vashandisi vanogona kuenda ku www.paygate.co.za kunoona chitupa chavo uye mutemo wekuchengetedza.
Vatengi ruzivo rwakaparadzaniswa nekadhi kadhi
Ruzivo rwevatengi ruchachengetwa naOptiSmile Inc. zvakaparadzana kubva kumakadhi ruzivo rwunopinda nemutengi pane yakachengetedzwa saiti yePayGate. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve PayGate tarisa kune www.paygate.co.za.
Merchant Outlet nyika uye mari yekutengesa
Iyo nyika yekutengesa nyika panguva yekuratidzira sarudzo dzekubhadhara kune muridzi wekadhi iSouth Africa. Shanduko mari iSouth Africa Rand (ZAR).
OptiSmile Inc. inotora mutoro wezvinhu zvese zvine chekuita nekutengeserana kusanganisira kutengeswa kwezvinhu nemasevhisi akatengeswa pawebhusaiti ino, kushandira vatengi uye rutsigiro, kugadzirisa gakava uye kuendesa zvinhu.
Ino webhusaiti inotongwa nemitemo yeSouth Africa uye OptiSmile Inc. inosarudza sayo domicilium citandi et executandi nekuda kwezvinangwa zvese pasi pechibvumirano ichi, kungave kuri maererano nedare redzimhosva, chiziviso, kana mamwe magwaro kana kutaurirana kwechinhu chipi zvacho.
Chigadzirwa uye / kana mazino masevhisi pawebhusaiti anongowanikwa kutengeswa kune vanhu vanogona kuita zvibvumirano zvinosunga zviri pamutemo.
Mutengi Zvakavanzika mutemo
OptiSmile Inc. inotora matanho ese ekudzivirira ruzivo rwevashandisi. Nechinangwa cheichi chikamu, "ruzivo rwemunhu" runotsanangurwa sezvakatsanangurwa muKusimudzira Kwekuwana Ruzivo Mutemo 2 wa2000 (PAIA). Iyo PAIA inogona kutorwa pasi kubva ku: http://www.polity.org.za/attachment.php?aa_id=3569.
Zvichienderana nekuwanikwa uye kutambirwa kwemubhadharo, zvikumbiro zvichagadziriswa mukati memazuva maviri uye kuendesa kunosimbiswa nenzira yeemail ine nhamba yekubhuka / yekuvhotera vocha.
Mirairo uye zvigaro zvakatemerwa masevhisi
Chero kuraira kwawakaiswa newe nenzira yakatsanangurwa muwebhusaiti ino, uye chero kugadzwa kunoitwa newe nenzira yakatsanangurwa muwebhusaiti iyi kupa kwako kutenga chimwe chigadzirwa uye / kana sevhisi yemeno yemutengo (kusanganisira kuendesa uye zvimwe mhosva nemitero) zvinotsanangurwa muwebhusaiti ino.
Izvi zvakare zvinosanganisira kubhadhara masevhisi pane yako digitally yakasainwa kotesheni mushure mekubvunza iwe pachako kana kuburikidza neterevhizheni vhidhiyo kubvunza, panguva yaunoisa odha yako pane aya maMitemo neMamiriro. OptiSmile Inc. inochengetera kodzero yekugamuchira kana kuramba kupihwa kwako chero chikonzero, kusanganisira, pasina muganho, kusawanikwa kwechinhu chero chipi zvacho uye / kana sevhisi yemazino, kukanganisa mumutengo kana chigadzirwa uye / kana tsananguro yebasa remazino yakatumirwa pane ino webhusaiti. , kana kukanganisa muodha yako. Chibvumirano chako nesu chinongovapo chete kana chichiendesa mberi kusimbiswa kwekugamuchira odha yako uye mubhadharo
Mitengo yechigadzirwa uye / kana yemazino masevhisi uye masevhisi uye kuendesa uye zvimwe zvikwereti zvinoratidzwa pane ino webhusaiti zviripo panguva yekubuda asi zvinogona kuchinja chero nguva uye zvinoenderana nekuwanikwa. Quote yakasainwa nedhijitari yekurapa-cheya mazino ekurapa ichave inoshanda chete kwemazuva gumi nemana kubva panguva yekusaina, uye musangano unongochengeterwa iwe chete, mushure mekutevera mirairo yekubhadhara pane ino webhusaiti uye mukoteisheni yako.
Ngozi uye Musoro
OptiSmile Inc. icharamba iine zita kune icho chigadzirwa uye / kana mazino masevhisi iwe aunoraira kusvikira iwe waita kubhadhara zvizere kune izvo zvigadzirwa uye / kana mazino masevhisi, asi njodzi dzese muchigadzirwa uye / kana mazino masevhisi achapfuura kwauri pavari kuendesa. kuenda kana kuunganidzwa nepositi kana sevhisi yebasa kana mushure mekugamuchira kurapwa mune yako yakasainwa kotesheni. Iwe unofanirwa kufunga kana uchiwana chero inishuwarenzi yakakodzera yezvinhu zvakarairwa nendege.
OptiSmile Inc. haizombovi nemhosva kune chero yakanangana, isina kunanga, inongoitika, yakakosha kana inokanganisa kukuvara, zvichikonzerwa nekushandisa kana kutadza kushandisa webhusaiti kana pamutengo wekutenga zvigadzirwa zvinotsiva uye / kana mazino masevhisi kana zvichikonzerwa nechero chigadzirwa uye / kana mazino masevhisi akatengwa kana kuwanikwa kana mameseji akagamuchirwa kana mashandisirwo akapinda kuburikidza newebhusaiti kana zvichikonzerwa nekuwana kusingabvumirwe kana kushandurwa kwekutumirwa kwako kana data kana chero ruzivo rwuri mune ino webhusaiti, kusanganisira asi kwete kuganhurirwa, kukuvara kwekurasikirwa purofiti, kushandiswa, dhata kana zvimwe zvisingabatike, kunyangwe kana tikarairwa nezve mukana wekukuvara kwakadai.
Kana chero mutemo weParamende unoreva muMitemo neMitemo chero nguva, mamiriro kana garandi, uye iwo Mutemo unodzivisa kana kurambidza zvinopihwa muchibvumirano kusanganisa kana kugadzirisa mashandisirwo, kana chikwereti pasi peshoko, mamiriro kana garandi, , mamiriro kana garandi ichaonekwa seinosanganisirwa muMitemo neMamiriro, zvisinei, mutoro kwatiri chero kukanganisa kwezwi rakadai, mamiriro kana warandi ichave yakatemwa, pane zvatinokwanisa, kune chero chimwe kana zvimwe zvinotevera.
kana kutyora kuchienderana nezvinhu:
kutsiviwa kwezvinhu kana kupihwa kwakaenzana kwezvinhu;
kugadziriswa kwezvinhu zvakadaro;
kubhadhara kwemutengo wekutsiva zvinhu kana wekuwana zvinhu zvakaenzana; kana
kubhadhara kwemutengo wekugadzirisa zvinhu; uye
kana kutyora kuchienderana nemasevhisi:
kugoverwa kwemasevhisi zvakare; kana
kuripwa kwemutengo wekuti masevhisi apihwe zvakare.
Dzokera uye Refund Policy
Tinovimba iwe uchafadzwa nekutenga kwako kana sevhisi. Kana iwe uchishuva kudzorera chero chinhu chakatengwa kubva kwatiri, isu tichafara kudzorera kana kuchinjana chigadzirwa chero chiri mune chakazara chinogadziriswa mamiriro. Kudzoka kunofanirwa kuitwa mukati menguva inogadziriswa (mazuva manomwe) uye mune yepakutanga, isina kuvharwa kurongedza. Kana isu tikaona kuti chigadzirwa uye / kana sevhisi yemazino haina kudzoserwa isu mumamiriro ekugadzirisa zvakakwana, tinochengetera kodzero yekuramba kudzorerwa pachinhu Kana iwe uchidzosera chinhu nekuda kwekukanganisa padivi redu kana nekuti chakakuvara. kana chakaremara, isu tinodzosera mari yekuendesa yawanikwa mukutumira chinhu kwauri uye kubhadhara mari yako yekuchidzosera kwatiri. Kudzoserwa pamabasa emazino kunotongwa nemutemo uye HPCSA.
Zvipikiso uye garandi
Isu tine mutemo uye tsika yemakambani yekuona kuti kurapwa kwese kuri kweyemhando yepamusoro uye kuchadzorera chero kurapwa kunoonekwa sekusaenzana.
Kupa kwezvinhu uye masevhisi naOptiSmile Inc. kunoenderana nekuwanikwa. Mune zviitiko zvekusawanika, OptiSmile Inc. inokudzosera iwe zvizere mukati memazuva makumi matatu. Kuregererwa kwemirairo nemutengi kunokwezva 30% mari yekufambiswa.
Ruzivo rwunopihwa neyemazino nyanzvi kana veOptiSmile vashandi
Iyo ruzivo uye maonero anopiwa nachiremba wemazino kana OptiSmile Mushandi zvakagadzirirwa kukubatsira iwe kuti unzwisise kliniki yako yekuongororwa uye yakarongedzwa chirongwa chekurapa. Unofanirwa kuziva kuti mushandi weOptiSmile asiri chiremba anogona kusazvidavirira neruzivo rwunopihwa nekutendeka kwakanaka kune kugona kwake / kugona kwake uye MIBVUNZO yese yakakosha maererano nezviitiko zvekurapwa, ruzivo rwechipatara, matambudziko , mhedzisiro, kufungidzira, garandi kuratidza kana kufungidzirwa, inofanirwa kubvunzwa zvakananga kune wekurapa mukunyora / email, WhatsApp kana kurekodha vhidhiyo kubvunza uye chinyorwa cheruzivo urwu rwakachengetwa newe nemurapi. Izvi hazvishandiswe sekutsiva kwakakodzera kuongororwa, kuchengetedza zvinyorwa, kunzwisisa, uye kubvumirwa nachiremba anorapa / nyanzvi / wehutsanana.
Kunyange isu tichiedza kupa ruzivo rwakanakisisa uye rairo inokwanisika OptiSmile Inc. uye ivo varairidzi vega havatori kana basa kana kupa vimbiso maererano nemhedzisiro.
Ipo zita rako uye nemazita ayo atinopihwa kana uchinyoresa mamwe maSevhisi asingangoerekana awaniswa kune chero munhu, zvakadaro tinochengetera kodzero yekuita kuti ruzivo ruwanikwe kuzviremera kana zvichidikanwa nemutemo.
Hatisi kuzotengesa kana kubvarura chero ruzivo rwunozivikanwa pamusoro pako kune chero wechitatu bato. Nekudaro, kuongorora kana kutora zvinyorwa zvako zvekunyoresa zvinogona kuitirwa zvinangwa zvebhizimusi kusvika panobvumidzwa nemutemo, senge semuenzaniso kudzora kwemhando yepamusoro uye kudzidziswa nechinangwa chekuvandudza maSevhisi edu. Zvisinei, mumamiriro ezvinhu aya, hatisi kuzoburitsa ruzivo runogona kushandiswa kukuzivisa iwe pachako.
Isu tichaomerera kune yedu yekuvanzika mutemo iyo yakakosha mazwi ayo aripo kuti iwe ubatanidze kune uye uverenge kubva pamba peji rewebhu ino.
Iwe unofanirwa kutizivisa isu nekukasira kana chero ruzivo rwako ruchinja.
Unobvuma kuti isu tine kodzero dzepfuma mukati uye kune ino webhusaiti uye kuti kusabvumidzwa kushandiswa kwayo kwakarambidzwa zvakajeka. Izwi kana mucherechedzo "OptiSmile", zvakadaro, inomiririrwa, kusanganisira chimiro chakamiririrwa, marogo ese anowirirana nezviratidzo uye kusanganiswa kwechero zvataurwa pamusoro apa nerimwe izwi kana mucherechedzo, anoshandiswa panzvimbo ino, ndiwo maratidziro akanyoreswa eOptiSmile.
Iwe ucha chengeta password yako yakachengeteka uye warandi kuti hapana mumwe munhu anoshandisa maSevhisi achishandisa password yako, uye iwe unobvuma zvakare kuti iwe une basa rekuona kuti hapana mvumo yekuwana maSevhisi anowanikwa uchishandisa password yako uye kuti uchave nemhosva kune vese zviitiko zvakadaro zvinoitwa zvichienderana nekushandisa kwakadai, kungave kwakabvumidzwa kana kwete.
Kubviswa uye kusiyanisa
Isu tinochengetera kodzero yekumisa maSevhisi kwauri kunyanya, kana kuruzhinji, pasina chiziviso kana chikonzero, kana kugadzirisa aya mazwi nemamiriro chero nguva. Shanduko dzakadai dzinozoiswa pane ino webhusaiti uye inoonekwa seyakagamuchirwa newe kana ukaramba uchishandisa maSevhisi. Izvo zvinosungirwa, saka, zviri kwauri kuti uongorore aya mazwi uye mamiriro nguva nenguva.
Aya mazwi nemamiriro ezvinhu anozotongwa pamwe nekufungidzirwa zvinoenderana nemitemo yeSouth Africa.
Aya mazwi nemamiriro akasununguka, pakuti kana chero gadziriro ikatemwa kunge isiri pamutemo kana isingamanikidzwe nedare chero ripi zvaro rine simba, ipapo gadziriro iyi ichaonekwa seyakabviswa pasina kukanganisa izvo zvasara zvemitemo nemamiriro.
Kukundikana kwedu kushandisa chero kodzero kana kupihwa kwemitemo iyi nemitemo hakungaite kuregererwa kwekodzero yakadaro kana kupihwa, kunze kwekunge kwatenderwa nekutenderwa nesu mukunyora.
Aya mazwi nemamiriro, sekusiyana nesu nguva nenguva uye zvinoumba chibvumirano chega pakati pako newe
Ino webhusaiti inotungamirwa naOptiSmile Inc. kambani inogara muSouth Africa ichitengesa seOptiSmile Dental uye Implant Specialists ine kunyoresa nhamba 2015/263716/21. Mutungamiriri Clifford Yudelman.
Suite 303 Iyo Point Mall
76 Regent Mugwagwa
Sea Point, Cape Town, Chamhembe Afrika
Tel: 087 702 6886